အရေပြားကို ဘယ်အခါမှ ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်တဲ့အရာ (၁၂) ချက် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အရေပြားကို ဘယ်အခါမှ ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်တဲ့အရာ (၁၂) ချက်
1. ဝက်ခြံကို ဘယ်တော့မှ မညှစ်ပါနဲ့။
ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံလေးက ကြီးလာ၊ ရဲလာ၊ စူထွက်လာပြီဆိုရင် ဒီဝက်ခြံကို ကိုယ့်အရေပြားပေါ်ကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မြန်ပျောက်သွားစေချင်ပြီးတော့ ညှစ်ထုတ်ဖို့ လက်ယားနေကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝမညှစ်ပါနဲ့။ အရေပြားကို သွားပြီးတော့ ထိခိုက်လိုက်ပြီဆိုရင် ရောဂါပိုး ဝင်နိုင်ချေ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ၊ အမာရွတ် ထင်နိုင်ချေတွေကို ပိုများစေပါတယ်။
2. Sunscreen (နေကာခရင်မ်) မလိမ်းဘဲ အပြင်ကို ဘယ်တော့မှမထွက်ပါနဲ့။
ကမ်းခြေတွေသွားမှ နေကာခရင်မ် လိမ်းဖို့လိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်သွားရင်လည်း လိမ်းသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ နေကာခရင်မ် လိမ်းတာကို ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်အလုပ်လို သဘောထားပြီးတော့ လိမ်းပေးပါ။ နေကာခရင်မ် မလိမ်းဘဲ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့ရင် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကို များစေတဲ့အပြင် အရေပြားကို ပျက်စီးပြီးတော့ အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ အမဲစက်တွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အရမ်းပူပြင်းတဲ့ နေရောင်အောက်ကို ထွက်ရမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် အကာအကွယ်တွေ ယူသွားဖို့ လိုပါတယ်။ နေရောင်ကို အကာအကွယ်ပေးမယ့် အဝတ်အစားတွေဝတ်ပါ၊ ဦးထုပ်ကားကားကြီးတွေ ဆောင်းပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် မွန်းတည့်ချိန်တွေ အပြင်မထွက်ပါနဲ့။ နေအရမ်းမပြင်းတဲ့ မနက်ခင်းတွေ၊ ညနေခင်းတွေမှာပဲ အပြင်ထွက်ပါ။
3. နေရောင်အောက် ရောက်နေချိန်မှာ အရေပြားပေါ်ကို သံပုရာရည်တွေ ဘယ်တော့မှ မလိမ်းပါနဲ့။
ဝက်ခြံအတွက် သံပုရာရည် လိမ်းပေးတာက အသုံးများတဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဒါက ပြဿနာတွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုလိမ်းရင် အလင်းကြောင့် တုန့်ပြန်မှုဖြစ်ပြီးတော့ အရည်ကြည်ဖု (သို့) အမဲစက် ထင်ပြီးတော့ လပေါင်းများစွာ ကျန်နေနိုင်ပါတယ်။
4. အဖြူရောင်မှင်သုံးပြီးတော့ တက်တူး ဘယ်တော့မှမထိုးပါနဲ့။
တက်တူးကို လေဆာနဲ့ ဖျက်တာကလွဲပြီးတော့ ဘယ်လိုမှဖျက်လို့မရဘူးဆိုတာကို သိကြပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ အဖြူရောင်မှင်ကိုတော့ လေဆာနဲ့လည်း ဖျက်လို့မရပါဘူး။ လေဆာနဲ့ထိရင် တစ်ခါတလေ မှင်အဖြူကနေ အမဲတောင် ပြောင်းသွားနိုင်ပါသေးတယ်။
5. ဘာတွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကို မသိရတဲ့ ခဏအတွင်းမှာ အကျိုးကျေးဇူးရစေမယ်ဆိုတဲ့ အလှကုန်တွေကို ဘယ်တော့မှမသုံးပါနဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့အရေပြားဆိုတာက အရမ်းနူးညံ့ပြီးတော့ အဖိုးတန်သလို အလွယ်တကူလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ခဏအတွင်းမှာ ကောင်းကျိုးရစေမယ့် အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲစေမယ်ဆိုတာ ဘယ်အရာမှမရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သေချာဖော်ပြမထားဘဲနဲ့ ခဏအတွင်း ဖြူဝင်းလှပစေမယ့်လို့ ကြော်ငြာတဲ့အလှကုန်တွေကို ဘယ်တော့မှမသုံးပါနဲ့။
6. အပြင်းစားကုထုံးတွေကို အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့။
ယခုခေတ်မှာ အင်တာနက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့ ကုထုံးနည်းလမ်းတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့ကပ်ခွါတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပေမယ့် အရမ်းပြင်းတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေလုပ်မှ အဆင်ပြေမယ့်အရာတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာ တစ်ခုခုမှားသွားရင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လို့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။
7. အရေပြားကို ထိုးဆွခြင်း ကုတ်ဖဲ့ခြင်းတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
အိမ်မှာ မှန်တစ်ချပ်ရှေ့မှာ ထိုင်ပြီးတော့ ကိုယ့်မျက်နှာကို သေချာကြည့်ပြီး ဝက်ခြံတွေ၊ အဖုတွေကို ကုတ်ဆွ၊ ဖဲ့ခြင်းတွေ ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့။ ဝက်ခြံတွေ၊ ဆားဝက်ခြံမဲမဲလေးတွေနဲ့ တခြားအဖုတွေကို ခဏခဏထိုးဆွခြင်းက ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ အမာရွတ်ထင်ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
8. ကိုယ့်ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာ မှဲ့အသစ်ထွက်လာတာ (သို့) ရှိပြီးသားမှဲ့က တစ်ခုခု ပြောင်းလာတာတွေရှိရင် ဘယ်တော့မှ လျစ်လျူရှုမထားပါနဲ့။
ကိုယ့်အရေပြားပေါ်မှာ မသင်္ကာစရာ တစ်ခုခုတွေ့ရင် အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ သွားပြဖို့ မနှောင့်နှေးပါနဲ့။
9. အရေပြားပေါ်က အရည်အိတ်လေးတွေကို ဘယ်တော့မှမညှစ်ပါနဲ့။
အရေပြားပေါ်က အရည်အိတ်တွေကို လူတွေက ထိုးဆွပြီးတော့ ညှစ်ထုတ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ အရည်အိတ်အတွင်းမှာ ပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့ ပြင်းထန်တဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေနဲ့ ပိုးဝင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကို ညှစ်မယ့်အစား ဆရာဝန်သွားပြပါ။
10. ဆပ်ပြာကို အလွန်အကျွံ မသုံးပါနဲ့။
ပိုသန့်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ ဆပ်ပြာတွေ အများကြီးနဲ့ မျက်နှာသစ်လို့လည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဆပ်ပြာတွေ အများကြီး သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ အရေပြားပေါ်က သဘာဝအတိုင်း ကာကွယ်ပေးတဲ့အရာတွေကို ပျက်စီးသွားစေပြီးတော့ ပိုးဝင်နိုင်ချေ၊ အရေပြားရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို ပိုများစေနိုင်ပါတယ်။
11. သက်တမ်းလွန်နေတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဘယ်တော့မှမသုံးပါနဲ့။
အရေပြားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေက အမြင်မှာ ကောင်းနေပေမယ့်လည်း သက်တမ်းကုန်သွားပြီဆိုရင် အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် သက်တမ်းကုန်မယ့်ရက်ကို အရင်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် သက်တမ်းမကုန်ခင်မှာ အကုန်သုံးဖို့ လုပ်ပါ။
12. အရေပြားပေါ်ကို ချွန်ထက်တဲ့အရာတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မထိုးဆွပါနဲ့။
ဝက်ခြံကို အပ်တွေ၊ ချွန်တဲ့အရာတွေနဲ့ ထိုးဆွခြင်း မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်တာက ပိုရောင်လာစေပြီးတော့ ပိုးဝင်တာ၊ အမာရွတ်ထင်တာတွေပဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မပျောက်တဲ့အပြင် ပိုတောင်ဆိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တို့ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော အရေပြားပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများ
၂၀.၈.၂၀၁၉ | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ရောက်လာတဲ့အခါမှာ အသားအရေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂရုစိုက်လာကြပါတယ်။ အဆီပြန်ခြင်းက ဒီအရွယ်မှာ အတွေ့များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အမွှေးအမျှင်တွေလည်းစပြီး ထွက်လာပါတယ်။
♦ ဘာကြောင့် အဆီ အရမ်းပြန်ရသလဲ?
အလုပ်များတဲ့မေမေတို့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းဖို့ ...
၁၈.၈.၂၀၁၉ | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
အမေတစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပထမအရေးကြီးဆုံးမှာ တစ်အိမ်လုံးကို ဂရုစိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းဖို့ အချိန်မရှိတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်း မစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အခါ ကိုယ်ကို မှီခိုနေကြတဲ့ လူတွေပါ ဒုက္ခရောက်ရတတ်ပါတယ်။